युट्यूबमा चुनावी गीत: दललाई भोट माग्दै कलाकार – Online Khabar
६. सलमानको दुखः फिल्मको नाम फेर्दा पनि पाएनन् सुख
७. विप्लव समूहबाट प्रभात चलाउने र जन्मदेव जैसीसहित ५ जना निस्काशित
८. काठमाडौंमै २८ वर्षीया युवती बलात्कृत
९. मन्त्रीको आदेशमा अस्पतालमा १४ जनालाई जागिर
१०. नेकपा सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीले अस्वीकृत गर्न सक्छ : युवराज ज्ञवाली
११. संघीयताको विरोध गर्नेहरु अबुझ हुन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल
१२. जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा जान मन्त्रीको स्वीकृति अनिवार्य
धिरजमाथि एकाधिकार जमाउँदै रेनशा, भन्छिन्- म उनको अभिभावक
हिल्साबाट झुण्ड्याएर सिमकोट ल्याइयो मनाङ एयरको हेलिकोप्टर
प्रदेश ५ को पहिलो समन्वय परिषद् बैठकः कानूनको अभाव प्रमुख चुनाैती–मुख्यमन्त्री
प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम राख्न सिफारिस, राजधानी गोदावरीमा
होमपेज / समाचार / देश
२०७४ कार्तिक २८ गते १२:०४ मा प्रकाशित
२८ कात्तिक, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी गीत सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेर गएको छ ।
डिजिटल दुनियाँमा चुनाव लक्षित गीत–संगीतको बाढी नै आएको देख्न सकिन्छ । युट्यूब च्यानलमा नै यतिबेला चुनाव लक्षित गीत नै बढ्ता चल्तीमा देख्न सकिन्छ । लोकदोहोरी गीतमा प्रसिद्धि कमाएका कलाकार बद्री पंगेनीले वाम गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्दै गीत तयार पारेका छन् ।
विशेषगरी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाममा नै उनले चुनावी गीत तयार पारेका छन् ।
विभिन्न जिल्लाका चुनावी अभियानमा व्यस्त रहनुभएका पंगेनीले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व हामी कलाकारको पनि हो । सोही दायित्वलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले वाम गठबन्धनको पक्षमा गीत गाएका हौँ ।”
युट्यूबमा पंगेनीले गाएको ‘एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विजयी गराऊँ’ भन्ने गीत ३४ हजारले हेरेका छन् भने ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विजयी गराऊँ’ भन्ने गीत यो समाचार तयार पार्दासम्म ८८ हजारले हेरिसकेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पंगेनीले नै गाएको ‘मै पनि एमाले’ भन्ने गीत १६ लाखले हेरेका छन् । अर्का जन गायक भनेर चिनिएका लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीले पनि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर गीत तयार पारेका छन् ।
खानेपानी, सिँचाइ, सडक, स्वास्थ्य अनि शिक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने वाम गठबन्धन जरुरी रहेको भन्दै खत्रीले गीतमार्फत, बेरोजगारले रोजगार पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न वामपन्थीको सत्ता जरुरी रहेको बताएका छन् । खत्रीको उक्त गीत हालसम्म १७ हजारले युट्यूबमा हेरेका छन् ।
यस्तै, टीका पुन र नवीन खड्काले पनि चुनावलाई केन्द्रित गरेर ‘आयो वाम गठबन्धन’ नामक गीत प्रस्तुत गरेका छन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा प्रचलित ‘सिंगारु टप्पा’ लोकलयमा तयार पारिएको उक्त गीत हालसम्म २३ हजारले हरेका छन् ।
यस्तै, माओवादीको सामना परिवारमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका झंकार बुढाले पनि चुनावी गीत ल्याएका छन् । सारङ्गी लयमा तयार भएको सो गीतमा ‘वाम गठबन्धनलाई किन विजयी गराउने’ भन्ने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै, लोकगायक सुनिल परियार, सम्झना विसीले ‘मिलाउ हातमा हात, देश बनाउने पार्टी हो एमाले’ भन्ने लोकलयको गीत तयार पारेका छन् ।
युट्यूबमा सो गीतले पनि राम्रो दर्शक पाएको छ । सार्वजनिक भएको सात दिनमा सो गीतले ३६ हजार दर्शक पाएको छ । गायक तारानाथ आचार्य र तारा पौडेलले ‘देशले खोजेको वाम एकता, जनताले रोजेको वाम एकता’ नामक गीत सार्वजनिक गरेका छन् । सो गीतले हालसम्म ६६ हजार दर्शक पाएको छ ।
लोकगायक डिल्ली परियार र अमित परियारले पनि पूर्वमा लाली छाउँदैछ भन्ने चुनावी गीत तयार पारेका छन् । सार्वजनिक भएको तीन दिनमा सो गीत १२ हजारले हेरेका छन् ।
वरिष्ठ लोक दोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले ‘एमाले जनताको साथमा छ’ भन्ने गीतमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । सो गीतले हालसम्म एक लाख ६१ हजारले हेरेका छन् ।
लोक दोहोरी गायिका राधिका हमालले ‘कांग्रेस हो सुख र दुःखमा’ भन्ने गीत सार्वजनिक गरेकी थिइन । स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा सार्वजनिक गरिएको सो गीतले राम्रो दर्शक पाएको छ । लोकदोहोरी गायक विमलराज क्षेत्री र स्मृति शाहीले पनि कांग्रेसका लागि चुनावी गीत गाएका छन् ।
यस्तै, नेतापिच्छे पनि चुनावी प्रचारका गीत बनाउने गतिविधि बढेर गएको छ । जाजरकोटमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतको नाममा चुनावी गीत बनाइएको छ । यस्तै, गोरखाबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार प्रकाशचन्द्र दुवाडीको नाममा पनि लोकदोहोरी गायक राजु ढकालले चुनावी गीत तयार गरेका छन् ।
नेपाल सांस्कृतिक संघ, रोल्पाले ‘चारतारे झण्डालाई’ भन्ने चुनावी गीत तयार पारेको छ । सो गीतले हालसम्म २० हजार दर्शक पाएको छ । त्यस्तै, लोक गायक भानुभक्त जोशीले ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विशेष’ भन्ने चुनावी गीत गाएका छन् ।
लोकगायक वैकुण्ठ महत र पूर्णकला विसीले पनि ‘आयो एमाले आयो’ भन्ने गीत सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै, गायक तथा संगीतकार चेतन सापकोटाले पनि चुनावी गीत गाएका छन् ।
संगीतकारसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता मणि थापा गीत–संगीतको माध्यमबाट चुनावी अभियान चलाउने विषय सकारात्मक भएको बताए । उनले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्ने भनेकै गीत–संगीत भएकाले पछिल्लो दिनमा गीत–संगीतको मात्रा बढेको जानकारी दिए ।
युट्यूबको ट्रेण्ड हेर्दा लोकशैलीमा गाइएका चुनावी गीतले बढ्ता दर्शक पाएका छन् । लोकशैलीमा मात्रै होइन, लोक—आधुनिक शैलीमा पनि चुनावी गीत तयार पारिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने वाम गठबन्धनलाई विजयी गराऊँ भन्ने गीत नै युट्यूबमा बढी देखिन्छन् ।
सलमानको दुखः फिल्मको नाम फेर्दा पनि पाएनन् सुख
गाउँमै स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी